छिरिङ डोल्मा भइन् मिसेस नेपाल टुरिजम - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
छिरिङ डोल्मा भइन् मिसेस नेपाल टुरिजम
काठमाडौं । स्टार वन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले राजधानीमा विवाहित महिलाबीच आयोजना गरेको सौन्दर्य प्रतियोगितामा छिरिङ्ग डोल्मा शेर्पा मिसेस नेपाल टुरिजम २०१९ को ताज चुमेकी छन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न मिसेस नेपाल टुरिजम २०१९ मा बौद्ध, फुलबारीकी छिरिङ्ग मिसेस नेपाल टुरिजमका साथमा बेस्ट हेयर उपाधि विजेतासमेत भएकी छिन् । उनी शिक्षिका हुन् ।
कोरियोग्राफर अश्विनी झाको सञ्चालन र कोरियोग्राफीमा भएको प्रतियोगितामा मिसेस एसिया प्यासफिक इन्टरनेशनल २०१८ तथा मिसेस नेपाल इन्टरनेशनल २०१८, अभिनेता गजित विष्ट, अभिनेत्री अरुणा कार्की, पेन्टागन कलेजका डाइरेक्टर डा. एसपी सिंह र सञ्चारकर्मी विकास थपलिया निर्णायक रहेका थिए। प्रतियोगिता पूजा निरौलाको आयोजना र बालकृष्ण पोखरेलको निर्देशनमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
भित्तेकलामा चर्चा बटुल्दै दाह्रीवाला सुमन
स्कुल डान्स च्याम्पियनसिपको २०७६ सिजन २ सम्पन्न
मिस गुरुङ इन्टरनेशनल सिजन ३ छनौट चरण समाप्त